Shir Ay Yeesheen Xukuumada Iyo Shacabka Gaashaamo - Cakaara News
Shir Ay Yeesheen Xukuumada Iyo Shacabka Gaashaamo
Gaashaamo ( Cakaaranews ) Jamce, 10ka June 2016. Waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay 3dii bisha Sane, 2008TI kadhacay hoolka shirarka ee magaalada gaashaamo Shir ay isugu yimaadeen waxgaradka degmada gaashaamo iyo xukuumada DDSI gaar ahaan saraakiil sare oo ciidanka qaranka ah, federal booliska, ciidanka liyuu booliska iyo mas’uuliyiinta gobolka iyo degmada gaashaamo.
Waxaa 27kii bishii Ginbood 2008TI maalintii sabtida ahayd, si kadis ah isugu dhacay baabuurka ambulanceta ee degmada gaashaamo oo markaa gar-gaar caafimaad ugu sugnaa tuulada Booda-dheere ee degmada gaashaamo iyo baabuur kontaraban siday oo bilaa taariko ah.
Hadaba Su'aasha ubaahan inay kajawaabaan dadkan beenta iyo barobagandada quuta Ee inay runta sheegaan ay ceeb kutahaay ee bilaash xaytayaasha ah dagaalka ay qaadday dablay hubaysan oo xoog iyo awood isbiday inay usheegtaan ciidan si sharci ah ugu jira shaqadiisii qaranimo dhimashada ka soo gaadhay maxasuuqbaa mise waa dad xaqdaro iyo xoog wax ku doonayay oo ku fashilmay weerarkii gardarada ahaa ee ay soo qaadeen. Ciidankuse inuu iska difaaco weerarka gardarada ah ee ay ku soo qaadeen dableyda hubaysan oo fulinayay qorshe kontirabandhistayaal iyo kuwa Alshabaab ah oo ku sameeyay ciidanka jidgooyo islmarkaana deegaankii nabada ahaa ka abuuray fal argagixiso oo sababay khasaare labada dhinacba ah?
Ugu danbeyna masuuliyiinta ka hadashay dhanka ciidanka Qaranka, ciidanka Federal booliska, ciidanka Gaarka ah iyo xukuumadaba waxay sheegeen inay aad ugu xunyihiin sida ay wax u dhaceen kadibna waxaa si wadajir ah la’iskula qaatay in hal meela looga soo wada jeedsado kontrabaandhiistayaasha iyo waxkasta oo dhib ku ah nabadgalyada iyo xasiloonida shacabka DDSI, gaar ahaan shacabka reer gaashaamo. Waxayna xukuumada iyo shacabkuba si weyn canbaareyn kulul ugu soo jeediyeen dadkii ka danbeeyay weerarka lagu qaaday ciidanka dawlada